Isiminyaminya eMbangweni nabahweba ezitaladini – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/Isiminyaminya eMbangweni nabahweba ezitaladini
Ukuminyana kwabantu bebanga umgwaqo nezimoto edolobheni eMpangeni seyimpilo yansukuzonke ngenxa yabadayisi asebakhe imijondolo
BATHWELE kanzima abahwebi basemgwaqeni edolobheni eMbangweni (eMpangeni) ngenxa yokuswelakala kwezindawo zokusebenzela osekudale ukungcola nesiminyaminya. Abanye sebakhe imijondolo yamapulangwe efulelwe ngoseyili abadayisela kuyo ngoba bethi sebelahle ithemba ngokuthola usizo kuMasipala uMhlathuze ophethe leli dolobha.
Ngesikhathi elaboHlanga lihambele kuleli dolobha ngeledlule lizibonele abantu behamba kabuhlungu, abanye baze bahambe emgwaqeni bevika izimoto ngenxa yokuswela indawo. Amatafula abadayisi agcwele yonke indawo. Ungafunga ukuthi kunabahlala emgwaqeni kuleli dolobha ngenxa yemijondolo eqaqele zonke izitaladi zakhona.
IBAYEDE isanda kubika ngesimo esingesihle abahwebi baseThekwini abasebenza ngaphansi kwaso, esigcina sidala ukungcola. Indlela imijondolo abasebenzela kuyo eMpangeni eyakhiwe ngayo ibeka engcupheni impilo yabadayisi nabathengi ngoba uma kusuka umoya omkhulu kungadaleka umonakalo.
Abadayisi kule ndawo ngabantu asebekhulile abondla imindeni, bafundisa nezingane kodwa bathi uMasipala awubakhathalele ngalutho.
Omunye wabahwebi othe ungowaseMatshana ocele ukungadalulwa, uthe usehwebe kuleli dolobha iminyaka engaphezu kwemihlanu edayisela ngaphansi kwalezi zimo.
“UMasipala ususethembise ukuthi uzosakhela izindawo ezingcono isikhathi eside. Sesilinde saze sakhathala. Asazi kumele siye kuphi manje. Sondla imindeni yethu ngale mvushwana esiyithola la. Sicela uHulumeni asizwele nathi.”
Owesifazane osekhulile othe ucela ukubizwa ngogogo wakwaBiyela ngoba igama aziwa ngalo leli utshele elaboHlanga ukuthi usedayise kuleli dolobha iminyaka engaphezu kweyishumi. Uthe zikhona izindlu ezake zakhiwa kwafakwa abathile angazi nokuthi kwasetshenziswa luphi uhlelo. Uthe kumanje kuthiwa kunekomidi elisha asebethembe lona okungenzeka kube khona elizobenzela khona.
Ezinye izindawo ezingaphansi kukaMasipala uMhlathuze iNseleni, iRichards Bay, eSikhaleni iNgwelezane, iVulindlela naseFelixton ezinabantu abathenga eMpangeni. Le ndawo inaMakhosi amahlanu abusayo eyakwaKhoza, uDube, uMkhwanazi, uMbuyazi kanye neyakwaZungu. Ngokwamawadi angama-30 esewonke lokhu kwenza isibalo sabantu abahlala kule ndawo sibe phezulu kakhulu kanti nezivakashi zitheleka ngobuningi.
Okhulumela uMkhandlu uMhlathuze uMnu uMdu Ncalane uthe: “UMasipala waseMhlathuze unazo izikhalazo zabadayisi basemgwaqeni baseMpangeni osazicubungula ngokuhlanganyela nabo. UMasipala ngokubambisana noMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu wabakhela abadayisi baseMpangeni e-A Rank izindawo ezisezingeni eliphezulu zokudayisela ezinogezi futhi ezikhiyekayo.”
Uthe lezi zindawo zakhiwa emuva kokuba kuxhunyenwe nabo kwavunyelwana.
Kuyishwa ke ukuthi abanye babo banikezwa izikhiye kodwa baqoka ukuthi baphindele ukuyodayisela ngaphansi koplastiki nezinqola zabo zamapulangwe.
Uqhube wathi abanye basebenzisa lezi zindlu ukugcina izimpahla nje kuphela bazikhiphe ekuseni bayozibeka elangeni nasemvuleni bese beyokhononda kwabezindaba bethi abanakekelwe iminyaka eyishumi nangaphezulu.
“Ngingakuqinisekisa ukuthi akulona iqiniso lelo. Nalaba abalethe izikhalazo nabo izingxoxo nabo zizohamba zifike ekutheni bathole izimvume zokudayisela endaweni efanele ngoba uma uMasipala usukhuculula abadayisi abangekho emthethweni bayoba seshweni lokuxoshwa kushaqwe nempahla yabo ngaphansi komthetho olawula abadayisi basemgwaqeni eMhlathuze.”
Ephetha uNcalane uthe uMkhandlu usanda kuvula izindlu zokusebenzela erenki eMpangeni, eNseleni, eMadlankala nakwezinye izindawo. Uthe lezi zindawo zanikezelwa kubantu ngenhloso yokubalekelela ukuthi basebenze endaweni esesimweni esifanelekile.
Ikhansela leWadi 23 uMnu uJacobus Barend de Lange uthe uyasazi lesi simo okukhulunywa ngaso inkinga enkulu ukuthi abantu abaningi abahweba kule ndawo abanazo izimvume. “Noma zikhona izinhlelo ezikhona zoMkhandlu ukuthuthukisa le ndawo kodwa nami angazi ukuthi kuzoba yinto yanini,” kuBarend de Lange
Uphethe ngokuthi uMkhandlu uke wazama ukuthi uyothekela ulwazi kuMasipala weTheku ukuthola ukuthi iyiphi imigomo onayo engasiza ukulawula ukuhweba edolobheni.
Induna ikhala ngokusala ngaphandle ohlelweni lwamaholo